Football Khabar » स्वारेजको उत्तराधिकारी वार्नर कि मार्टिनेज ? : नयाँ प्रशिक्षकले थाले तयारी
स्वारेजको उत्तराधिकारी वार्नर कि मार्टिनेज ? : नयाँ प्रशिक्षकले थाले तयारी
स्पेनिस बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक क्विके सेटिनले चोटग्रस्त खेलाडी लुइस स्वारेजको विकल्पमा तत्कालै भरपर्दा खेलाडी भित्र्याउन क्लबसँग छलफल थालेका छन् । उनले क्लबको बोर्ड अधिकारीसँग हालको संकट टार्न मात्रै नभएर ९ नम्बर जर्सी लगाउने दीर्घकालीन खेलाडी भित्र्याउन आन्तरिक छलफल अघि बढाएका हुन् । यस्तो खबर स्पेनिस मिडियाले छापेका छन् ।
उरुग्वेन फरवार्ड स्वारेज चोटका कारण यो सिजनभर टोलीबाहिर भएका छन् । उनको अप्रेसन भएकाले उनलाई ठीक भएर मैदान फर्किन अर्को सिजनसम्म पर्खिनुपर्छ । अर्कातर्फ, चाँडै ३३ वर्ष पुग्न लागेका स्वारेजको बढ्दो उमेरले बार्सिलोनालाई नयाँ खेलाडी भित्र्याउन दबाब दिने पक्का छ ।
हालै नियुक्त भएका प्रशिक्षक सेटिनले बाँकी सिजनमा राम्रो गर्न तत्कालै स्वारेजको आवश्यकता टार्न सक्ने नयाँ खेलाडी भित्र्याउन काम थालेका छन् । उनको पहिलो रोजाइमा जर्मन क्लब आरबी लेइपजिगका युवा फरवार्ड टिमो वार्नर रहेका छन् । उनी जर्मन खेलाडी हुन् ।
तर, टोलीका कप्तान लिओनल मेस्सीले भने अझै पनि तत्कालै स्वारेजको विकल्प नखोज्न क्लबलाई दबाब दिइरहेको बताइन्छ । यदि त्यसो गर्नु परे पनि इटालियन क्लब यन्टर मिलानका युवा फरवार्ड लौटारो मार्टिनेजलाई भित्र्याउनुपर्ने लाइनमा उनी छन् । मार्टिनेज अर्जेन्टिनाकै हुन् ।
तर, सरुवा बजारमा वार्नर र मार्टिनेजको मूल्यमा फरक छ भने प्रदर्शनको स्तर र तथ्यांकमा पनि ठूलो फरक छ । मार्टिनेजको मिलानमा रिलिज क्लज नै १११ मिलियन युरो छ । यता, वार्नरलाई लेइपजिगले ७०–८० मिलियन युरोसम्ममा छाड्न सक्ने चर्चा छ । हाल सरुवा बजारमा वार्नरको भ्यालु ९० मिलियन युरो छ ।
बार्सिलोनाका प्रशिक्षक सेटिनको रोजाइमा मार्टिनेजभन्दा वार्नर पहिलो रोजाइमा परेका छन् । कारण– वार्नर मार्टिनेजभन्दा राम्रा गोल मेसिन र फिनिसिङ क्षमता भएका खेलाडी हुन्, यो तथ्यांकले नै देखाउँछ । मार्टिनेज २२ वर्षका छन् भने वार्नर २३ वर्षका छन् । अर्कातर्फ बार्सिलोनाको खेल शैलीसँग मार्टिनेजभन्दा वार्नरको खेल शैली मिल्ने भएकाले सेटिन वार्नरको पक्षमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यता, वार्नर भित्र्याउन इंग्लिस क्लब लिभरपुल र चेल्सीसमेत लागेका छन् । खास गरी लिभरपुलका प्रशिक्षक जोर्गेन क्लोप वार्नरलाई भित्र्याउन लागेका छन् । चेल्सी पनि वार्नरको पछि लागेको छ । प्रशिक्षक सेटिनको मत बलियो बने बार्सिलोना वार्नर भित्र्याउन लिभरपुलसँग भिड्नुपर्ने देखिन्छ ।
यता, मिलानले भने मार्टिनेजलाई नबेच्ने बताउँदै आएको छ । मार्टिनेज स्वयंले पनि आफू मिलानमै खुसी रहेको बताउँदै आएका छन् । यो बताइन्छ कि, बार्सिलोनामा मैदानभन्दा बढी बेन्चमा बस्ने खतराबीच मार्टिनेज बार्सिलोना सरुवामा राजी हुन सक्दैनन् । बार्सिलोनामा फ्रेन्च विंगर उसामान डेम्बेले र उदाउँदै गरेका युवा खेलाडी अन्सु फाती, कार्लेस पेरेजसँग समय बाँडेर खेल्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ रहन्छ, जुन मार्टिनेजका लागि घातक हुनसक्छ । बार्सिलोनामा अहिले नै मेस्सीसँगै एन्टोनी ग्रीजम्यान, डेम्बेले छन् । बार्सिलोनाले समरमा पूर्वखेलाडी नेइमार फर्काउने चर्चा पनि छँदैछ ।
यही अवस्था वार्नरको हकमा पनि लागू हुन्छ । वार्नर वा मार्टिनेज जो भए पनि ‘फुल टाइम’ खेलाडी हुने सर्तमा मात्रै बार्सिलोना सरुवामा राजी हुनसक्ने बताइन्छ । किनभने, मार्टिनेज मिलान र वार्नर लेइपजिगका प्रमुख र फुल टाइम खेलाडी हुन् । उनीहरू ठूला क्लबमा गएर ‘बेन्च खेलाडी’ हुन चाहँदैनन् । करिअरको सबैभन्दा सक्रिय उमेरमा उनीहरूका लागि यस्तो सरुवा ठूलो घाटाको विषय पनि बन्छ ।
टिमो वार्नरको यो सिजन :
खेल – २६
गोल – २५
असिस्ट – ८
वार्नर – २३ वर्ष
मार्केट भ्यालु – ९० मिलियन युरो
लौटारो मार्टिनेजको यो सिजन :
खेल – २५
गोल – १५
असिस्ट – १
मार्टिनेज – २२ वर्ष
रिलिज क्लज – १११ मिलियन युरो
प्रकाशित मिति ७ माघ २०७६, मंगलवार १८:०१